Muqdisho:-Allaha u naxariisto Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, Allaha u naxariistee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa mudo badan waxaa uu ku howlanaa faafinta diinta Islaamka waxaan uu ka mid ahaa culimada waaweyn ee laga qadariyo dalka Soomaaliya.
Allaha u naxariisto Sh.Nuur Baaruud Gurxan ayaa waxaa lagu dhibay faafinta diinta Islaamka waxaan xiray dowladdii Kacaanka, wuxuuna ka mid ahaa 10 culimo ah oo ay dil ku xukuntay dawladii uu hogaaminayey Maxamed Siyaad barre 1985,Waxaa kale oo alle Sh.Nuur ka badbaadiyey weerar ay Al-shabaab ku bartilmaamsadeen Hotel uu ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariisto Sh.Nuur Baaruud Gurxan ayaa waxaa wiil uu dhalay dilay kooxda al-shabaab balse Sheekh ayaa waxaa uu caan ku ahaa geesinimo iyo hadal cad oo uu ku diiday afkaarta qaloocan ee lagu banaystay dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee muslinka ah wuxuuna Sheekh Nuur Baaruud ka mid ahaa culimada fara ku tiriska ah ee ka hortimid afkaarta gaalaysiinta ah taas oo khataro badan uu u galay.
Allaha u naxariisto, Sh.Nuur Baaruud Gurxan danbigiisa allaha dhaafo, Sabar iyo iimaana Allaha naga wada siiyo. Ehelkiisa, Caruurtiisa allaha ugu badalo wax kheyr qaba Aamiin.